Albert Einstein: Guul-darrooyinkii isu Beddelay Garaadka Sarreeya | Maankaab.com
Albert Einstein: Guul-darrooyinkii isu Beddelay Garaadka Sarreeya
Albert Einstein waxa uu dhashay 1879. Waa ninka aynu badankeenu u naqan inuu ka mid yahay dadkii ugu garaadka sarreeyey ee koomka soo maray. Garaadkiisa, aqoontiisa iyo waxa uu dunida ku soo koriyey waxa ku lammaana guul darrooyin badan oo uu ka soo gudbay. Xaqiiqdii, Einstein ma uu hadli oo wax hadal kama soo bixin ilaa intii uu afar sannadood gadhaayey.
Waxa uu ahaa qof aan ku fiicnayn wax barashada, waxaan taas kuu caddaynaya waxa uu 16 ku guul darraystay inuu ka gudbo imtixaankii uu ku geli lahaa dugsiga Swiss Federal Plytechnic oo ku yaal magaalada Zurich, kuma uu istaagin oo kama hadhin waxbarashadii ee dugsiii aakhirkii wuu galay, balse intii uu Jaamacadda ku jiray waxa uu la taag darnaa waxbarashada, kuna dhawaaday inuu iskaga baxo Jaamacadda. Waxa uu darajooyin hoose keeni jiray duruusta iyo culuumta uu Jaamacadda ka dhiganaayey.
Aabbihii intii aanu dhian waxa uu aaminsanaa in wiilkiisu yahay mid khasaaray, taasoo Einstein ku keeni jirtay niyad-jab aad u weyn, maadaama waalidkiis ka aaminsanaa mid khasaaray.
Markii uu Jaamacadda dirqi kaga qallin-jebiyey, waxa uu la yaabanaa amma uu ku wareersana halka uu gaadhi doono iyo sida uu noqon doono. Aakhirkii waxa uu helay shaqo ah caymiska iibgeyntiisa, isagoo guri kasta oo degaankiisa ah garaacay si uu u iibgeeyo caymiska uu ka hawlgalay.
Muddo laba sannadood ah kadib, waxa uu shaqo ka helay xafiiska Qiimaynta alaabaha (Patent Office) . Waxa uu ka noqday caawiyayaha imtixaamaha (Assistant examiner), waxaannu qiimayn jiray codsiyada alaabaha kala duwan ee xafiiskiisa soo gaadha.
Dabcan, qofka aad arkaysaan caqabadaha iyo guul darrooyinka soo wajahay waxa uu dunida aakhirkii ku soo biiriyey taariikh aan ilaa hadda hadhin , gaar ahaan cilmiga Faysigiska iyo xisaabta. Sidoo kale, waxa uu inaga caawiyey in aan fahano sida cilmiga dunidan yaala u shaqeeyo, waxa uu sameeyey amma uu fikirkooda lahaa shuruuc hadda lagu dhaqaajiy cilmiga fysisigsa, waxa uu noqday faylasuuf falsafadaha siyaasiga ah ka soo burqamaan. Waxa uu sannadkii 1921kii ku guulaystay bilada Nobel Prize. Waxa uu bilaabay aragtiyo muhiim ah. Waxa uu intaas oo dhan ku kasbaday dedaal iyo horumar.
Aqoonyahan kasta oo waxbarta wuu yaqaan Einstein. Waxa uu u daba fadhiista cilmiyo badan iyo maskaxda uu lahaa aawadeed.
W/D: Ibraahim Khadar